Esemokwu Spam na gburugburu ụwa dị ize ndụ; Ịdọ Aka ná Ntị Site na Ọkụ
Ndị na-emepụta Malware echebara uche ha site na netwọk netwọk weebụ na ebumnuche nke ịde data onye ọ bụla. Ọ na-emepụta echiche na ndị ọrụ mmepụta ihe ndị a ahọrọwo ịmeghachi azụ. Kama usoro eji eme ihe maka nnọkọ na nnọkọ ahụ na-aga n'ihu, malware amalitelarị iji usoro dị mfe.
Oliver King, Onye Ọrụ Nchịkọta Ọrụ nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, na-enye ịdọ aka ná ntị maka mmegide dị egwu sitere n'aka ndị nledo ụwa.
Ọ bụ ezie na otu akụkụ dị elu nke anyị na-echekarị hoodlums dijitalụ dịka onye mmemme nke ọgụgụ isi nke na-egbu egbugbere ọnụ na-awakpo site n'azụ onyinyo nke hoodie, eziokwu nke okwu ahụ bụ akụkụ kachasịsịsị bụ ndị ọrụ ntanetị. Ha anaghị enwe nsogbu ma na-ezukọta oge a iji nweta nchebe nchebe siri ike. Kedu ihe mere ị ga - eji gbalịsie ike ịbakute nsogbu ahụ niile mgbe ị nwere ike ịpị onye ọrụ iji nyefee data ma ọ bụ ịpị njikọ?
Ndị na-emepụta Malware na-enye ndụmọdụ gbasara IP boycotts ka ha nwee ike ịlụ agha iji spam na-enye ya iji nọgide na-enwe nchebe dị anya site na nchọpụta na ọnụọgụ igbe mbata ọfụma.
Akwụkwọ akụkọ manye na-ekwe ka ndị na-emepụta malware kpebie ma ha emetụla igwe na-enweghị ntụpọ na ụdị obiọma. na nke ọ bụla n'ime ụmụaka nwata ahụ a na - enye. Ụmụaka ụmụaka ahụ na - elegharị anya gburugburu ụwa ma dị nso, na - egosi na onye ahụ na - eme ihe na - eme ka ụwa niile nwee ike imegide nke otu mpaghara. ke edinam emi enye okụtde mbon emi ẹkedọhọde ke mbemiso ẹkewotde enye.
Ọ ga-emechi onwe ya ma ọ bụrụ na ịchọta mmemme dị na ígwè arụmọrụ, na ngwa ngwa ndị ahụ na-egosi na nso nke onye nyocha malware. Ọ bụrụ na ego ndị ahụ na-agafe, Sarvdap n'oge ahụ na-agbalị ijikọta na peeji nke ọdịda Microsoft iji nwalee nnweta na emesị jikọọ na oku na nchịkwa njikwa.
Ọ bụ atụmatụ tụnyere itinye aka na njikwa njirimara malware njikwa nchịkwa dị ka ọrịa Add up to by VXers trying to test whether their Trojans will glitter underneath hostile to infection radars.
Nke a nwere ike ịgbasa. Ndị na-ede Malware na-enweta mgbe niile site na ndị na-agba ọsọ. Ndị na - emepụta ihe dị ukwuu maka botnets spam-centered nwere ike ịbara uru site n'ịgbakwụnye ego nlekota ụmụaka iji gbasaa ọnụọgụ spam.
Na-arịba ama na n'agbanyeghị na ị bụ ụdị isi nke cybercrime, spam na - anọgide na - emewanye ihe - na - ebute ụdị ọ bụla nke malware, ransomware na ozi phishing - na ndị akpakọrịta nke ọ bụla, Edmunds kwupụtara na e nwere "ọganihu bara uru" nke enwere ike iwere iji gbochie agha ndị a Source .
Otu n'ime ndị ahụ bụ itinye ikikere nke Nkwado Ozi Ozi DMARC, Nkwupụta na Nkwenye - na nkesa nkwenye email nke na-enye ndị ahịa ohere ịchọpụta ihe bụ ezigbo ozi-e na ihe spam mechara site na ikike zuru ezu maka ọganihu na nchekwa